Mpiasa voaroaka iharan’ny fandoavan-trosa ao Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Mpiasa voaroaka iharan'ny fandoavan-trosa ao Taiwan
Voadika ny 15 Novambra 2012 23:41 GMT
Zava-mitranga toa somary manaraby ihany, fa dia mitady hitory ireo mpiasa izay noroahin'ny tompon'orinasa efa ho enina amby folo taona lasa izay, ny Vaomieran'ny raharahan'ny mpiasa (CLA) ao Taiwan, ity farany izay misahana amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Mitady vola amin'ny fitoriana an'i Mpanao lalàna Yuan any amin'ny fitsarana ity vaomiera itya noho ny filazan'ireo mpiasa efa mihoatra 2.000, ho tsy namerina velively ny “fampisamborana” natolotry ny governemanta ho sandan'ny fandroahana.
Naneho fihetsiketsehana entina hanoherana ny fanapahan-kevitry ny CLA [zh], hatramin'ny Jolay 2012 teo ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpiasa-na Orinasa Nikatona” sy ny mpanohana azy ireo. Iray amin'ireo tolona matetika voambara amin'izany ny fibodoana ny métro ao Taipei ny faha-10 Aogositra 2012.
Ireo lasibatra indray no mitrosa
Ny 10 Aogositra 2012, nampiasa ny Toby Métro ao Taipei ireo mpiasa avy amin'ny AWCF hanoherana ny fanenjehana ataon'ny CLA. Saripika avy amin'ny coolloud.org. Nahazoana alalana tsy ampiasaina ara-barotra.
Ny taona 1998 no niatombohan'ny tantara, rehefa nifindra tao Shina sy firenena hafa [zh] ireo orinasa maro tao Taiwan hampihenany ny vola laniana ho an'ny mpiasa. Nanambara ho bankirompitra ireo tompon'orinasa ary nandà tsy handoa ny karaman'ireo mpiasa, ny fisotroan-drononony ary ny tambin-karama hafa. Nitsoaka any amin'ny firenen-kafa ny ankabeazan'ireo tompon'orinasa ireo ka nanokatra indray ny orinasany ka namela irery ireo mpiasa ao Taiwan manao fihetsiketsehana ao anatin'ny fahakiviana .Nirahina avy eo ny CLA hanelanelana ny mpiasa sy ny tompon'orinasa. Saingy nandà ny handoavana ny onitra hatrany ny tompon'orinasa, nanapa-kevitra ary ny CLA hamaha ny olana amin'ny alalan'ny “fampisamboram-bola” ireo mpiasa hialany amin'ny olana ara-bola mandra-pahitan'izy ireo asa vaovao indray. Ny fahazoana azy dia hoe tsy mamerina ity lazaina hoe “fampisamboram-bola” iny mpiasa satria lasibatra.
Saingy nivadika tamin'ny fanekena ny tao amin'ny CLA ka nitaky tamin'ny antenimiera Yuan vola 20,56 tapitrisa NTD (eo ho eo amin'ny 709 000 USD eo) hitoriana ireo mpiasa efa maherin'ny 2.000 izay tsy “namerim-bola”. Tamin'ny fandrenesana izany fanapahan-kevitra izany ary, nanohitra manoloana ny antenimiera Yuan [zh] ny AWCF ny 31 Oktobra. Manafintohina ny nataon'ny CLA, araka ny nasongadin'i [zh] Tiny fatty ao amin'ny bilaoginy:
Nandany ny antsasam-piainany tamin'ny asa ny mpiasa iray ka nahazo ny karamanyfisotron-dronony ny farany ny mpiasa iray. Ankehitriny, tsy maintsy mamerim-bola izy. Raha sendra mahazo ahy na ianao ve ny toy izany, dia tsy hangataka na hitaky ny rariny ianao?
Mba hisorohana ny mety fifandirana hafa indray, dia tapa-kevitra fa hampiato ny raharaha ny CLA, saingy mandà [zh] kosa ny fanafoanana ny teti-bola ho fitoriana, izay midika fa mety mbola hitory indray aoriana. Ny tena marina anefa araka ny nolazain'ny fampahalalam-baovao mahaleo tena ao Taiwan, coolloud.org [zh], nikiry hatrany ilay solotenan'ny CLA Keng-Pei (李庚霈) nilaza fa “Fampisamborana” ihany ny vola nozaraina tamin'ireo mpiasa 16 lasa izay:
Tsy maninona izay fifampiraharahan'ny governemanta tamin'ireo mpiasa ireo, tsy manana atontan-taratasy ho porofo izahay. Ny hany tadiavin'ny CLA sisa dia ny mitady vahaolana izay azon'ny roa tonta ekena.
Nanontany ny fomba fiasan'ny CLA i Jack and the beanstalk:
Moa ve tsy andraikitry ny CLA ny mikarakara ny zon'ny mpiasa? Mifanohitra amin'izay anefa, mangataka teti-bola 20 tapitrisa dolara ny CLA hitoriana ireo mpiasa ireo…